Seychelles dia misokatra ho an'ny mpitsidika na aiza na aiza, fa ....
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Misokatra amin'ny mpitsidika na avy aiza na aiza i Seychelles, saingy….
Seychelles dia nanamora ny fitsidihan'ny mpitsidika azy
Seychelles dia handray ireo mpitsidika vita vaksiny avy amin'ny faritra rehetra maneran-tany.
Mba hahafantarana azy ireo ho "vaksiny", ny mpitsidika dia tsy maintsy afaka mampiseho fa nandray ny fatran'ny vaksinina ie, dos roa miampy 2 herinandro aorian'ny fatra faharoa ho an'ireo vaksiny efatra amin'izao fotoana izao izay iharan'ny fampahalalam-baovao mavesatra. Ny mpitsidika dia mila mandefa taratasy fanamarinana tena izy avy amin'ny fahefana ara-pahasalamam-pireneny ho porofon'ny vaksiny COVID-19 miaraka amin'ny taratasy fanamarinana COVID-19 PCR ratsy, nahazo latsaky ny 72 ora alohan'ny dia.
Ny Vondronosy Ranomasimbe Indianina dia manadihady ny fomba fitadiavany miditra mba hahafahan'ny besinimaro mitsidika azy ho ampahany amin'ny fanombohana ny fizahantany fizahan-tany ho an'ny 2021 sy ny sisa. Ireo fepetra vaovao dia hampiharina amin'ny dingana roa.
Ny vaovao, nandrasan'ny indostrian'ny fizahantany, dia nambaran'ny minisitry ny raharaham-bahiny sy fizahan-tany, Andriamatoa Sylvestre Radegonde nandritra ny famelabelaran-kevitra niarahany tamin'ny minisitry ny fahasalamana, Ramatoa Peggy Vidot ny alakamisy 14 janoary 2021.
Ny fanadihadihana dia taorian'ny fanombohana ny fampielezan-kevitra momba ny fiarovana imailaka tao amin'ny firenena kely nosy. Ny fampielezan-kevitra dia nanantena ny hanana vaksiny latsaky ny telo ampahefatry ny olon-dehibe eo an-toerana hatramin'ny tapaky ny volana martsa 2021.
Misy vokany eo noho eo, Seychelles dia handray ireo mpitsidika vita vaksiny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Mba hahafantarana azy ireo ho "vaksiny", ny mpitsidika dia tsy maintsy afaka mampiseho fa nandray ny fatran'ny vaksinina ie, dos roa miampy 2 herinandro aorian'ny fatra faharoa ho an'ireo vaksiny efatra amin'izao fotoana izao izay iharan'ny fampahalalam-baovao mavesatra. Ny mpitsidika dia mila mandefa taratasy fanamarinana tena izy avy amin'ny fahefana ara-pahasalamam-pirenena ho porofon'ny fanaovana vaksiny COVID-19 miaraka amin'ny taratasy fanamarinana COVID-19 PCR ratsy, nahazo 72 ora latsaka talohan'ny dia.
Mpitsidika tsy manao vaksiny:
Ny mpitsidika rehetra mahazo alalana hiditra ankehitriny (Sokajy 1 sy 2, mpandeha fiaramanidina manokana) dia mila mampiseho fanandramana PCR ratsy latsaky ny 72 ora alohan'ny dia. Talohan'ny 14 Janoary 2021, ny sokajy 2 dia nitaky fitsapana latsaky ny 48 ora.
Ireo mpitsidika tsy vita vaksiny na tsy avy amin'ny sokajy 1 na 2 na mandeha fiaramanidina manokana dia mbola tsy afaka miditra. Hanan-kery izany mandra-pahatongan'ny tapaky ny volana martsa raha vantany vao nanao vaksiny ny Seychelles maro an'isa amin'ny olon-dehibe.
Tapaky ny volana martsa
Raha vantany vao vita vaksiny ny ankamaroan'ny olon-dehibe ao Seychelles, hisokatra amin'ny mpitsidika rehetra ny firenena, na vita vaksiny na tsia. Amin'izay fotoana izay, ny mpitsidika dia mila PCR ratsy alaina 72 ora latsaka alohan'ny dia.
Na inona na inona voalaza etsy ambony, ny mpitsidika dia tokony hanaraka ny fepetra ara-pahasalamana efa misy (ohatra ny fanaovana sarontava tarehy, ny halaviran'ny fiaraha-monina sns ...) izay mihatra hatrany araky ny torohevitra momba ny dia navoaka tao amin'ny tranokalan'ny Departemantan'ny fizahantany- http://tourism.gov.sc/. Toy izany koa, ny mpandraharaha fizahantany rehetra dia mbola takiana hanaraka ny fomba fiasa efa mahazatra COVID-19 efa mahazatra.
Ny antsipiriany misimisy momba ireo fepetra vaovao dia havoaka ao amin'ny Seychelles Travel Advisory amin'ny andro ho avy ary azo idirana amin'ny www.owusim.gov.sc
Famaritana ho an'ny mpampiasa finday Fampivoarana ny varotra, ny varotra sy ny fanjifana ary ny Prospects tatitra momba ny fikarohana momba ny indostria 2021-2030- market.biz
Tarehimarika momba ny fifamoivoizana Fraport 2020: Ny isan'ny mpandeha dia latsaka ambany amin'ny tantara noho ny areti-mandringana Covid-19